1 tirto faylasha
1.1 dhirta taariikhda Delete / raadinta
1.2 Delete Kukiyada
1.4 Delete Downloads
1.5 Si joogto ah tirto faylasha
1.6 Xafido tirtirto
1.7 xamanayaan Files
Amarka 1.8 files Delete
1.10 Delete Google Chrome
1.11 gal Delete
1.12 files nuqul Delete
1.13 Force tirto faylasha in la isticmaalo
1.14 Doctor Delete
1.15 files jir Delete
1.16 files kharribeen Delete
1.17 files Delete qufulan
1.18 files undeletable Delete
1.19 OST tirtirto. files
1.20 Delete YouTube channels / videos
1,21 files junk Delete
1.22 furin Delete iyo virus
1.23 files junk Delete
1.25 qashinka Delete
1.26 ma tirtiri kartaa Error
2.1 Ladnaansho files tirtiray
2.2 Undelete qalab
2.3 Undelete Plus lagu bedelan karo
2.4 Undelete 360 ​​kale oo
2.5 kale oo NTFS Undelete
2.7 dib u soo ceshano Emails tirtiray
2.8 Ladnaansho photos tirtiray ka iPhone
2.9 Ladnaansho files tirtiray ka card SD
2.10 Ladnaansho files tirtiray ka Android
2.11 Ladnaansho photos tirtiray
2.12 Ladnaansho files tirtiray ka recycle bin
2.13 Ladnaansho fariin qoraal tirtiray
2.14 Ladnaansho files tirtiray ka USB
2.15 Ladnaansho xijaab tirtiray
2.16 files Ladnaansho DropBox tirtiray
2.17 kale oo Recovery EaseUs tirtiray Files
2.18 Ladnaansho tirtiray video
2.19 Ladnaansho wareejin tirtiray files
2.20 tirtireyso shil tirtirto
2.21 xiriir la xaawilayo in la tirtiro
Undelete 2:22 Mac
2.23 Ladnaansho folder tirtiray
2.24 Ladnaansho files tirtiray ka drive qalinka
2.25 soo ceshano SMS tirtiray
2,26 Notes soo ceshano tirtiray
2,27 Android Apps inuu ka soo kabsado files tirtiray
2,28 Ladnaansho tirtiray Documents Word
2.29 Nidaamka loo soo celiyo files tirtiray
Waxaa jira tiro dhowr jeer ah marka ay lagama maarmaan noqoto in ay tirtirto fayl ka qalab kuwa. Badanaa tani dhacdaa marka ka kooban fayl ku noqday aan waxtar lahayn iyo in yar oo goobta fadhiya qaadato ilaa meel qiimo badan ee ka mid ah ayaa computer. Laakiin wadada keenta in la xorayn, ilaa meel ku saabsan qalab ka mid ma aha sida sahlan sida ay u muuqato.
Dhibaatooyinka la xiriira tirka fayl on Windows / Mac
1) Mararka qaar waxaa jira ilaa pop in ay hidde u muuqan la joogo aad riixdid batoonka ku tirtirto ah. Ilaa pop Tani waxay badanaa ka dhigayaa in folder aan la tirtiri karaa, sababtoo ah waa in la isticmaalo. Tani waa sababta ka mid ah xanuun madaxa laakiin aan wax badan laga walwalo. All inaad samayso waa la xiro folder ka dibna tirtirto folder adiga oo riixaya badhanka tirtirto.
2) Waxaa jira waqtiyo fayl aan la tirtiri karaa, sababtoo ah dadka isticmaala ay diido inuu wax ka beddelo gal. Ilaa pop A ilaa furmay iyo wargalinaya dadka isticmaala in ay helaan galka loo diiday iyo in dadka isticmaala ay u baahan tahay ogolaansho in ay tirtirto gal. Tani waxay badanaa ka dhacdaa marka user la kuwaas oo isku dayaya in ay tirtirto gal ma aha mid ka mid ah uu waxaas uumay.
3) Mararka qaarkood ku MAC, xitaa ka dib markii aad la tirtiro folder ay khuseyso waxa ay weli ku adkeysaneysa qalabka iyo cuna bannaan. Takhalusid files on MAC waa hab fog ka adag yihiin tirka files daaqadaha. In times sida kuwan software cusub u baahan tahay in lagu xiro si ay si xoog ah ka saar galka hoos walaac.
Sidee in ay tirtirto fayl on Windows. (3 siyaabood)
Habka koowaad, waxaad u tagtaa gal ah in aad rabto in aad tirtirto oo xaq guji ku yaal. Liiska fursadaha muuqan doonaa. Laga soo bilaabo ka mid ah kuwa fursadaha aad u leedahay in guji tab sida calaamadsan "Delete" in ay tirtirto gal ay goobta ay hadda joogaan.
Waxa muhiim ah in la ogaado waa in la isticmaalayo habkan folder kaliya ee laga tirtirayaa ay booska hadda, in ay tirtirto folder ee folder wanaagsan waa in sidoo kale la tirtiro ka Recycle Bin. Marka waxa la tirtiray ka bin recycle ka dibna waxaa ka soo baxay ayaa qalab u wanaagsan.
Haddii galka goob joog ka ahaa ee drive USB ah, ka dibna ku dul socda habka kor ku soo sheegnay, folder waxaa laga tirayaa nidaamka weligiis iyo uma baahnid inaad wax laga walwalo waxaa la tirtiro ka ayaa sidoo kale Recycle Bin.
Mararka qaarkood, marka fayl ku jira aad u weyn oo cabbirka waa ay ka kooban yihiin kumanaan files ama waraaqaha ka dibna ay qaadan kartaa waqti badan si ay u tirtirto. In dunida ka mid ah ganacsatada, dib u dhac sida kaliya waa mid aan la aqbali. Sidaas darteed haddii aad abid soo gaartay noocan oo kale ah dib u dhigay oo doonaya in ay u hubiso in aan ku xanuunsan aadan ka sida dib u dhac mar kale, ka dibna waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan si degdeg ah amarka soo socda:
Tani waa hab aad u fiican in ay tirtirto files in haddii kale waxay qaadan kartaa saacadood in ay tirtirto.
Wax A in mid loo baahan yahay in si taxaddar leh oo ku saabsan marka la isticmaalayo habkan waa in habkan waa mid joogto ah, marka aad geliso degdeg ah amarka, in ay tahay, ma jiraan wax ay dib ugu noqonayaan, fayl ku aadan in ay meel dibadda ah sida bin recycle tagaan , waxay si fudud u tirtiray wanaag.
Sidaas, ogahay xaqiiqda ah in aad rabto in aad tirtirto oo dhan files ee folder ka hor inta aadan sida war qoraal ah oo final siiyo.
Saddexaad iyo habka ugu fudud in laga takhaluso gal ah waa in guji galka ka dibna riix furaha u tirtirto. Furaha delete waa sida caadiga ah la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey:
Adoo isticmaalaya habkan, tagaa gal galay bin recycle ka halkaas oo folder waa in sidoo kale la tirtiro si ay dadku u saari karaan folder weligiis ah.
Sidee in ay tirtirto fayl ku MAC.
Habka koowaad waa iska sahlan. Waxaa bilaabmaa marka lagu soo helo gal ah in aad rabto in aad tirtirto oo isticmaalaya isku darka Control + F. Marka aad hesho galka ka ururinta fayl, aad waxaa lagu sameeyey shaqo qeybtii. Helitaanka fayl ku MAC ma aha mid fudud sida loo helo fayl daaqadaha. Ma jiro software ah file Tababaraha shaqeeya ee MAC sida sameeyaa on Windows, sidaas, waxaad u baahan tahay si ay u tagaan oo ku saabsan helidda waxyaabaha aad doonayso in aad gacanta tirtirto. Marka aad hesho folder aad rabto in aad tirtirto, aad si fudud u soo jiidi kartaa galka galay trashcan ah. Laakiin sida kaliya ee daaqadaha, taas oo aan ahayn sida joogtada ah ay uga takhalusi fayl yahay. Si loo hubiyo in fayl ay joojiyaan in ay jiraan gabi ahaanba aad u baahan tahay in ay ka saarto fayl ka qashinka karaan.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa saxaafadeed amarka + wareejin + tirtirto oo aad uga takhalusi karo files weligood.
Waxaa jira amarka ah oo aad u xoog badan ee MAC ah in loo isticmaalo in ay tirtirto fayl si joogto ah. Waxaa loo yaqaan "fuliyaan shirkad" amarka, waa gaaban wuxuu tegsiiyaa shaqada. Amarkani waxa uu yahay mid fudud ilaa xad iyo waxaa loo isticmaali karaa in ay tirtirto files iyo fayl labadaba. Wixii la tirtiro files oo dhan isticmaala inay leeyihiin waa geliso amarka sida "magaca file fuliyaan shirkad" laakiin fayl, sidoo kale loo yaqaan diiwaanka adduunka MAC ah, si degdeg ah amarka waa in "magaca folder rmdir ee". Kuwa soo socda shot screen muujinaysaa degdeg ah amarka loo isticmaalaa in lagu tirtirto gal ah ee lagu calaamadeeyay Archives.
Mararka, ay sabab u adag ee nidaamka MAC ka hawlgala waxaa jira wax badan oo fayl madhan in la abuuri karo, kuwaasina waxay qaadan kartaa ilaa badan oo boos. Kuwani fayl madhan waxaa inta badan ka qarsoon araggaaga heshid iyo in si fudud looga heli karaa ayadoo marka hore la furo finder ka dibna adiga oo riixaya gacanta + F. waxa uu kuu furayaa sanduuqa raadinta taas oo ka caawisa in la helo agabka ku Mac ah, ka dibna nooc raadinta baahan yahay in la cayimay, waxaa lagu wadaa in uu Folder. In tirada alaabta, tirada ayaa lagu wadaa inuu ka yar yahay 1. folder ayaa la 00 hoose waxay muujinaysaa folder madhan. Tallaabada xigta waa cadaalad ah oo fudud, galka lagu jiido karaa in Recycle Bin.
10 File Deleters Best in saar Faylal ay la rabin ka Windows
3 hanad Siyaabaha Delete File ah ee isticmaal in Windows
Sidee inuu ka soo kabsado wareejin tirtiray files
Adobe Systems: Adobe Photoshop Qaybaha for Mac
Adobe Dreamweaver CS6 u Mac
5 Siyaabaha la wareegay Screenshot ah ee Mac OS X (El Capitan)
> Resource > Mac > 6 Siyaabaha tirtirto folder on Windows / Mac